Emmanuel Eboue Oo Rajo Ka Qaba In Uu Cayaaraha Dib Ugu Soo Laabto – Heemaal News Network
Daafacii hore Arsenal ayaa shaaca ka qaaday inuu aadi doono bariga dhexe hadii uu ka helo fursad uu kusii wadan karo ciyaarista kubadda cagta, waxeyna tani ka dhigan tahay inuu waddo walba u marayo sidii uu xirfadle mar kale u noqon lahaa.
Emmanuel Eboue ma ciyaarin tan iyo sanadkii 2016 markaas oo ay iska fasaxday Sunderland kadib markii lagu ganaaxay inuu bixin waayay lacagta wakiilkiisa.
Dhamaadkii sanadkii lasoo dhaafay ayey aheyd markii uu wareysi buuxa siiyay xidigaan reer Ivory Coast shabakadda Mirror Football, isagoo u shegay inuu ku dhawaaday nafsadiisa inuu dilo.
Dhibaato badan ayaa soo gaartay daafacii hore Gunners maadaama uu musalafay tiiyo ay jirto in xaaskiisa ay kaga guuleysatay la wareegidda hantidiisa, isagoo sidoo kale ka sheekeeyay inuusan muddo badan arkin caruurtisa.
Iyadoo ay taasi jirto ayuu hadana rajeynayaa inuu ciyaaro kubadda cagta, walow uu yahay 34-jir aan sida badan la qabsan karin ciyaaraha heerka sare ee yurub.
“Waxa aan doonayo waa inaan kusoo laabto kubadda cagta, wali waxaan leeyahay awood” ayuu yiri isagoo la hadlayay CANAL +.
“Xitaa waan adi lahaa Baghdad iyo Paksitan kaliya si aan u ciyaaro kubadda cagta, kalama jecli meesha ay tahay”
Khasaaro ka Dhashay Weerar Caawa Lagu Qaaday Saldhiga Dhaxe Magaalada Boosaaso.